के तथागत बुद्ध पुनर्जन्मको सिद्धान्तलाई मान्नु हुन्थ्यो?
July 11, 2019 Internet Khabar
महाराज ! तथागतले यो कुरा अब्याख्यित (ब्याख्या रहित) राख्नु भएको छ ।
यो कस्तो कुरा हो ! जब म तपाईंलाई सोध्छु कि तथागत मरणान्तर रहनु हुन्छ ? तब तपाईं भन्नुहुन्छ तथागतले यो कुरा अब्याख्यित राख्नु भएको छ र जब म दोस्रो प्रस्नु गर्छु तब पनि तपाईंको उत्तर यहि हुन्छ कि तथागतले यो कुरा अब्याख्यित राख्नु भएको छ । तथागतद्वारा यश कुरालाई अब्याख्यित राख्नुको कारण के हो ?
त्यसैले यो भन्न सकिदैन कि तथागत मरणान्तर रहनु हुन्छ रु या फेरि तथागत मरणान्तर रहनु हुन्न ?
यसै प्रकार महाराज यदि कोहि तथागतको सज्ञाले, तथागतको संस्कारले, तथागतको बिज्ञानले तथागतलाई मापन गर्न चाहे तब उहाँ बिज्ञान परित्यक्त (यी सबैभन्दा पर) हुनुहुन्छ । उहाँ जडमुल बाट काटिएको हुनुहुन्छ, उहाँ ताड बृक्ष जस्तै अभाव प्राप्त गरिसक्नु भयो । समुन्द्रको तल झै उहाँसम्म पुग्न सकिदैन । त्यसैले यो भन्न सकिदैन कि तथागत मरणान्तर रहनु हुन्छ ? या फेरि तथागत मरणान्तर रहनुहुन्न ?
यसपछी कोसल नरेस राजा प्रसेनजित भिक्खुणी खेमालाई अभिनन्दन गरि आफ्नो गन्तव्य तर्फ लागे ।
तब यो कस्तो कुरा हो ! जब म तपाईंसग सोध्छु कि के तथागत मरणान्तर रहनुहुन्छ ? तपाईं भन्नुहुन्छ मैले यस कुरालाई अब्याख्यित राखेको छु । जब म दोस्रो प्रश्न गर्छु तब पनि तपाईंको उत्तर यहि हुन्छ कि मैले यो कुरा ब्याख्या रहित राखेको छु । तथागत तपाईंले यश कुरालाई ब्याख्या रहित राख्नुको कारण के हो ?
महाराज तथागत बुद्धलाई अभिनन्दन गरेर गए । (साभार :- बुद्धकथाएँ) via JanataLive
आजको राशिफल: वि.सं. २०७६ असार २५ बुधबार
नेपालगञ्जमा उपचार हुन नसकेपछि गम्भीर घाइते प्रहरीलाई काठमाडौँ ल्याईयो